ရေ အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ရေ အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
ရေ အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ရေ အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အပိုင်း အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင်, Dampers နှင့် တူသော usages.AOX ပေးသွင်း အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး AOX-R ကို ကို စီးရီး ရေ အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ နှင့် မြင့်သော perဘို့mance.We များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ထောက်ပံ့ သို့ အားလုံး ၏ ကျွန်တော်တို့၏ client များ လှည့်ပတ် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီးကို။
torque ~ 5000 အသက် 30 rangeï¼
1. Wide torque အကွာအဝေး: AOX-R ၏ torque စီးရီးရေအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ပုံစံကို 30Nm-5000Nm ဖြစ်ပါတယ်။
2. AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့အလြယ္ကူ cams set: အီလက်ထရောနစ်န့်သတ်ချက် switch ကို cam.The အနေအထားကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထူး tool ကိုမပါဘဲတိကျစွာနှင့်အဆင်ပြေသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
AOX-R ရဲ့အထက်နဲ့အောက်အဖုံးအဆစ်စီးရီးရေအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်မယ့်ခွက်-ခုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာချမှတ်နှင့်အတွင်း pad ပါတဲ့ဆီလီကွန်အို-လက်စွပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်လျားသည်နှင့်အိုမင်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်, နှင့်အမြင့်ဆုံး IP68 အောင်မြင်နိုင်ပါသည်, ထိုအသွင်အပြင်လှပသောဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမတော်တဆမှု၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီးသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ Outsourcing ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိခိုက်စေ, စိတျအပိုငျးမြားနှငျ့ equipment.It လျှပ်စစ် actuator turn ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည်နိုင်ရန်အတွက်။
1. AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစနစ်တကျ install နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီလျှပ်စစ် actuator နှင့်အဆို့ရှင်ကိုဖွင့်။
6. AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလျှပ်စစ် actuator ဖွင့်နှင့်အဆို့ရှင်နဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏နမူနာလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: သင်သည်သင်၏ AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားအစိတ်အပိုင်းအတွက်မည်သည့်လက်မှတ်လျှပ်စစ် actuator turn ရှိပါသလား?
hot Tags:: ရေ အထောက်အထား အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်